एक महिनादेखी बे’पत्ता भएकि सुजिता’को श’व शौ’चालय’को ट्याङ्कीमा फेला , देवर-ससुराको मिलेमताे’मा ह’ ‘त्या ! - Public 24Khabar
Home News एक महिनादेखी बे’पत्ता भएकि सुजिता’को श’व शौ’चालय’को ट्याङ्कीमा फेला , देवर-ससुराको मिलेमताे’मा...
महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिका ७ भ्रमरपुराकी २६ वर्षीया सुजिता ठाकुर श’व फे’ला परे’को छ । एक महिनाअघि बेपत्ता बनाइए’की सुजिता’को शव आइतबार शौचालय’को ट्याङ्की’मा भेटिए’को प्रहरी’ले जनाएको छ ।
प्रहरीले विशेष सुराकीका आधारमा निर्माणाधीन पेट्रोल पप्पको शौचालय’को ट्याङ्की’मा फ’लिए’को श’व फे’ला पारे’को हो । श’व फा’ले’र ट्याङ्की’माथि प्ला’स्टर ग’रिए’को थि’यो । सुरा’की’पछि प्रहरी’ले प्लास्टर फुटाएर श’व’को खा’न’त’ला’सी गरे’को थि’यो ।
सुजिताको जेठ २० गते देवर, ससुरा, देवरानीसहित’को संलग्नता’मा ह’ ‘त्या भए’को आ’रो’प छ । सुजिता’को घर पक्षले भने सुजि’ता अन्य पर’पु’रु’ष’सँग भागे’को भन्दै आएका थिए । माइत पक्षले भने सुजिता’को ह’ ‘त्या भए’को दा’बी ग’रेर छा’नवि’न गर्न माग गरेको छ । तर माइती पक्ष’को मग’लाई प्रहरी’ले वा’स्ता गरे’को छैन ।
घ’टना’को अ’नु’स’न्धान ग’र्न अधिकारकर्मी गुन्जा राय र सामाजिक अभियन्ता सरोज राय पनि प्रहरीसँग आग्रह गरेका थिए । तर, महोत्तरीका एसपी दिनेश आचार्यले आफूहरुको आग्रहलाई नमानेको उनीहरुले बताएका छन् ।
उनीहरुले मधेसी आयोग र महिला अधिकार आयोगमापनि घटना’को छा’न’विन’का ला’गि आवश्यक पहल गरिदिन निवेदन पठाएका थिए । मधेसी आयोग’का अध्यक्ष विजय द’त्तले तत्का’लै घ’ट’ना’को छान’विन गर्न महोत्तरी प्रहरी’लाई प’त्रा’चार ग’र्‍यो । लगत्तै प्रहरीले माइत पक्षले आ’शं’का गरेको खेतमा असार १३ खोजी गर्‍यो ।
श’व फे:ला परे’को स्थलमा सुजिताकी आमा सुनिता पनि पुगेकी थिइन् । छोरी’को श’व फे’ला परे’पछि आमा सुनिता पटक-पटक बे’हो’श भए’की छ’न् । वि’क्षि’प्त स्थिति’मा रहेकी आमा सुनिता भन्छिन्- मेरो मुटु नै चुँडेर लगे, अब कसको मुख हेरेर बस्नू ? नेपाल प्रेस बाट
Previous articleनेपाली बैज्ञानिक महावीर पुनलाई अमेरिकाको ठूलो सम्मान: विश्वभर चर्चा, नेपालीको लागि गर्वको बिषय !! भिडियो हेर्नुहोस् (सेयर गराै)
Next articleज्ञानेन्द्र शाहीलाई पत्रकारले र्‍याखर्‍याख पारेपछि देखाए एकएक प्रमाण – र’क्सी वि’वाद देखि चेक सम्म (भिडियो हेर्नुहोस)